Ịhazi onye na-arụ ọrụ TP-Link (300M Wireless N Router TL-WR841N / TL-WR841ND)
Editor Si NhọRọ October 16,2019
Kọmpụta Windows NEC VersaPro VU nwetara Celeron N4100 processor
Ụlọ ọrụ NEC webatara kọmputa kọmputa VersaPro VU, nke dabeere na Windows 10. Otu n'ime atụmatụ ndị dị na ngwaahịa ọhụrụ bụ ndị na-arụ ọrụ Intel Gemini Lake na usoro modem LTE. NEC VersaPro VU kwadebere ya na ihuenyo 10.1-inch na mkpebi nke 1920x1200 pikselụ, ihe mgbaàmà Intel Celeron N4100 quad, 4 GB nke Ram na 64 ma ọ bụ 128 GB nke nchekwa nchekwa.
Esi arụkwa Windows 10 bootloader
The malfunction nke Windows 10 bootloader bụ nsogbu na onye ọ bụla ọrụ nke sistemụ nwere ike ihu. N'agbanyeghị nsogbu dịgasị iche iche nke nsogbu, iweghachi bootloader adịghị mfe. Anyị ga-anwa ịchọta otú ị ga-esi nwetaghachi Windows ma gbochie ihe omume nke arụkwaghịm.
Okwuntughe na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ nkeonwe bụ isi na ụzọ kachasị dị irè ịmechi ndị mmadụ na-enweghị ikike inweta data nke onye nwe usoro ọrụ na ngwaọrụ. Dịka akụkụ nke ntụziaka a, anyị ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu ụdị usoro na n'ọnọdụ ndị ọ ga-ekwe omume ịrụghachi mweghachi ahụ.
Ọsọ ọsọ nke egwuregwu na Windows 7, 8, 10 - ụlọ ọrụ kachasị mma na mmemme
Mgbe ụfọdụ, ọ na-eme na egwuregwu ahụ na-amalite ịda mbà n'ihi ihe doro anya ọ bụla: ígwè ahụ na-agbaso usoro ihe achọrọ, kọmputa adịghị arụ ọrụ dị iche iche, na kaadị vidio na onye nhazi ahụ adịghị arụ ọrụ. N'ọnọdụ ndị ahụ, ọtụtụ mgbe, ọtụtụ ndị ọrụ na-amalite ime mmehie na Windows. N'ịgbalị idozi lags na friezes, ọtụtụ na-eweghachị usoro ahụ iji kpochapụ faịlụ ndị na-agba ọsọ, tinye OS ọzọ dịka ya na onye ọrụ ma gbalịa ịchọta nsụgharị nke egwuregwu kachasị mma.
Windows 8 maka mmalite
N'isiokwu a, m ga-amalite nkuzi ma ọ bụ nkuzi na Windows 8 maka ndị ọkachamara kachasị na-agba ọsọ n'ime kọmputa na sistemụ arụmọrụ a n'oge na-adịbeghị anya. Ihe dị ka 10 nkuzi ga-ekpuchi iji ojiji arụmọrụ ọhụrụ na nkà dị iche iche nke ịrụ ọrụ ya - na-arụ ọrụ na ngwa, ntinye mbụ, desktọọpụ, faịlụ, ụkpụrụ nke ọrụ nchekwa na kọmputa.
Esi edebe vidiyo site na kamera
Mgbe ụfọdụ, ndị ọrụ mkpa idekọ vidiyo site na kamera weebụ, mana ha niile amaghị otú e si eme ya. N'okwu a taa, anyị ga-ele anya ụzọ dị iche iche onye ọ bụla nwere ike isi jide kamera ozugbo. Ịmepụta vidiyo site na kamera weebụ E nwere ọtụtụ ụzọ iji nyere gị aka idekọ na igwefoto kọmputa.
Dozie ihe kpatara njehie 0xc0000005 na Windows 7
Windows sistemụ arụmọrụ, nke bụ ngwanrọ siri ike, nwere ike ịrụ ọrụ na njehie maka ọtụtụ ihe. N'isiokwu a, anyị ga-atụle otu esi edozi nsogbu ahụ na koodu 0xc0000005 mgbe ị na-agba ọsọ. Njehie na-ezighị ezi 0xc0000005 Nke a, nke a na-egosipụta na igbe nzahie, na-agwa anyị banyere nsogbu dị na ngwa ahụ n'onwe ya ma ọ bụ n'ihu ọnụnọ mmemme niile na usoro nke na-egbochi ọrụ nkịtị.
Melite ndị ọkwọ ụgbọala na Windows 7
Maka ịrụ ọrụ ziri ezi nke ngwaọrụ ejikọrọ na kọmpụta, ọ dị mkpa ịnọgide na-enwe mkpa nke ngwanro nke na-enye mmekọrịta n'etiti ngwaike na sistemụ arụmọrụ. Ngwaọrụ dị otú ahụ bụ onye ọkwọ ụgbọala. Ka anyị kọwaa nhọrọ dị iche iche maka emelite ha maka Windows 7, adabara dị iche iche nke ndị ọrụ.
Otu esi agbanye Wi-Fi na Windows 7
Nsogbu na netwọk ikuku na-ebili n'ihi ọtụtụ ihe kpatara: ngwaọrụ netwọk, ndị ọkwọ ụgbọala na-adịghị mma, ma ọ bụ nkwarụ Wi-Fi nwere nkwarụ. Na ndabara, Wi-Fi na enyere gi aka (ma ọ bụrụ na ndị ọkwọ ụgbọala kwesịrị ekwesị) na ọ dịghị achọ ntọala pụrụ iche. Wi-Fi anaghị arụ ọrụ Ọ bụrụ na ịnweghị Internet n'ihi Wi-Fi nwere nkwarụ, mgbe ahụ, na ala aka nri ala, ị ga-enwe akara ngosi a: Ọ na-egosi na agbanwụ Wi-Fi agbanyụrịrị.
Njikọ kwesịrị ekwesị nke gamepad na kọmputa
Ọ bụghị ihe egwuregwu kọmputa, karịsịa ndị na-esi na consoles, na-ejikwa iji keyboard na òké dị mfe. N'ihi nke a, nakwa maka ụfọdụ ndị ọzọ, ọ nwere ike ịdị mkpa iji jikọọ na ịhazi egwuregwupad na PC. Ijikọ egwuregwupad na PC Mgbe ị rịọrọ, ị nwere ike jikọọ kọmputa na ụdị egwuregwu ọ bụla nke nwere akpa ntanetị kwesịrị ekwesị.
Na ọnọdụ ụfọdụ, onye ọrụ ahụ nwere ike ịnweta ozi gbasara diagonal nke ihuenyo na laptọọpụ ma ọ bụ nyochaa kọmputa nkeonwe. Ebe ọ bụ na ọ dị anya site na anya, n'agbanyeghị na ọnụnọ nke ụkpụrụ dị na mpaghara akụkụ, ọ na-anọgide na-eji nweta ihe ngwọta ọzọ maka mbipụta a.
Onye Mgbachitere Defender Windows (Defender Defender Offline)
Windows ọhụrụ nke Windows 10 nwere "ihe na-akwadoghị Windows" nke na-enye gị ohere ịlele kọmputa gị maka nje virus na wepụ ihe omume ọjọọ ndị siri ike iwepu na sistemụ arụmọrụ. Na nyocha a - otu esi agba onye na-agbachitere Windows 10, yana otu ị ga - esi jiri Windows Defender Offline na nsụgharị OS - Windows 7, 8 na 8.
Wepụ "Volcano Casino" site na kọmputa na Windows 7
Ndị ọrụ ụfọdụ na-achọpụta na mgbe ị na-egwugharị na ihe nchọgharị ha na-emepekarị weebụsaịtị na mgbasa ozi Vulcan, ụlọ obibi na ihe nchọgharị weebụ agbanweela na isi akwụkwọ a, yana mgbasa ozi na-amalite ịpụta ọbụna n'oge ọrụ nkịtị na PC Ịntanetị.
Ndewo Enwere ajụjụ mara ezigbo mma n'oge na-adịbeghị anya. Aga m ekwu ya ebe a. Ya mere, ederede nke akwụkwọ ozi ahụ (pụta ìhè na -acha anụnụ anụnụ) ... Ndewo. M na-eji Windows XP arụ ọrụ arụ ọrụ na n'ime ya niile nchekwa meghere na otu click nke òké, yana njikọ ọ bụla na Intaneti. Ugbu a, m gbanwere OS na Windows 8 na nchekwa wee malite imeghe ya na pịa abụọ.
Site na otu n'ime ndị na-agụ ya, ajụjụ ahụ bịara na post banyere ebe na otu esi budata mbụ Windows 8.1 Foto ụlọ ọrụ maka ihe nlele na igwe arụmọrụ. Ejikwa ya kpọmkwem ebe a pụrụ ịchọta ya na weebụsaịtị Microsoft, ebe ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume ime nke a n'onwe ha. Hụkwa Wụnye Windows 8.
Mgbe ị na-arụ ọrụ ọ bụla na onye ntụgharị okwu Windows 7 ma ọ bụ na-amalite ngwa (egwuregwu kọmputa), ozi ezighi ezi nwere ike ịpụta: "Ọrụ a rịọrọ chọrọ ka mmụba." Ọnọdụ a nwere ike ime ọbụna ma ọ bụrụ na onye ọrụ emepewo ngwanrọ ngwanrọ na ikike nke onye nchịkwa OS. Ka anyị malite ịgwọ nsogbu a.
Otu esi Malitegharịa ekwentị Windows 8
Ọ ga - adị ka ọ dị mfe karịa ịmalitegharịa usoro ahụ. Mana n'ihi na Windows 8 nwere interface ọhụrụ - Metro - maka ọtụtụ ndị ọrụ a na-eweta ajụjụ. A sị ka e kwuchara, na ebe mbụ na Malite menu ọ nweghị bọtịnụ shutdown. N'okwu anyị, anyị ga-atụle ọtụtụ ụzọ ị nwere ike isi Malitegharịa ekwentị gị.
Ịchọpụta IP nke ngwaọrụ site adreesị MAC
Adreesị IP nke ngwaọrụ netwọk ejikọrọ dị ya mkpa site na onye ọrụ na ọnọdụ mgbe a na-ezigara ya ụfọdụ iwu, dịka ọmụmaatụ, akwụkwọ maka akwụkwọ obibi na onye nbipute. Na mgbakwunye na nke a, e nwere ihe atụ ole na ole; anyị agaghị depụta ha niile. Mgbe ụfọdụ, onye ọrụ ahụ na-enwe ọnọdụ ebe ọ na-amaghị maka adreesị netwọk nke akụrụngwa, ma enwere adreesị nkịtị, ya bụ, adreesị MAC.
Njehie 0x80070643 mgbe ị na-etinye Update Definition maka Windows Defender na Windows 10
Otu n'ime njehie ndị na-eme ka onye ọrụ Windows 10 nwere ike izute bụ ozi "Ntọala Ntọala maka Windows Defender KB_NUMBER_ENALTY- error 0x80070643" na ebe melite. N'okwu a, dị ka a na-achị, a na-arụnyere nkwenye Windows 10 nke ọma (Cheta: ọ bụrụ na otu njehie ahụ na-apụta na mmelite ndị ọzọ, hụ
Enwere ọnọdụ mgbe ịkwesịrị ịmegharị "Desktọpụ Desktọpụ" na kọmputa gị iji nye ya onye ọrụ nke na-enweghị ike ịnọ kpọmkwem na nso PC gị, ma ọ bụ iji nwee ike ijikwa usoro sitere na ngwaọrụ ọzọ. Enwere mmemme ndị ọzọ pụrụ iche nke na-arụ ọrụ a, ma na mgbakwunye, na Windows 7, ị nwere ike idozi ya site na iji usoro RDP 7 ahụ.